Muxuu gantaalka culus ee K/ Waqooyi tijaabisay uga dhigan yahay adduunka? - Bulsho News
Warbaahinta dowladda ayaa baahisay sawirka gantaalka
Horraantii toddobaadkan, Kuuriyada Waqooyi ayaa ku dhawaaqday inay si guul leh u tijaabisay gantaal nooca riddada dheer ah oo awood u leh inuu ku dhufto inta badan Japan.
Gantaalaha maraakiibta, oo ka duwan gantaalaha ballistic -ga ah, way leexan karaan oo la hagi karaa inta badan duulimaadkooda – taasoo u oggolaanaysa inay kaa soo weeraraan xaglo lama filaan ah.
Waxay muujineysaa in Kuuriyada Woqooyi ay sii waddo baadi goobkeedii waligeedba ee ahaa hub aad iyo aad u kala duwan oo casri ah si ay u baahiso awooddeeda nukliyeerka.
Tijaabadii ugu dambaysay ee guulaysatay waxay keenaysaa su’aalo taxane ah – muxuu dalkan Kuuriyada Woqooyi hadda u samaynayaa tijaabadan, sidee bay arrintani muhiim u tahay, maxayse nooga sheegaysaa mudnaanteeda?
Kuuriyada Woqooyi waxay si ballaadhan ugu jihaysan ballaadhinta awoodda nukliyeerka tan iyo gugii 2019.
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, ayaa tan iyo markii uu ka soo laabtay shirkii fashilmay ee bishii Febraayo 2019 isaga iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald J. Trump ku yeeshay Hanoi, Vietnam, wuxuu caddeeyay inay ka go’an tahay inay sii wadaan maal-gelinta ka hortagga Nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi iyo raacitaanka istiraatiijiyad difaaca qaranka oo “isku-tiirsan”.
Laakiin sababta ay Kuuriyada Waqooyi u dooratay inay tan samayso xitaa iyada oo la halgameysa cunno yari iyo xiisad dhaqaale oo sii qoto dheer ayaa ah weli su’aasha taagan?
Arrintan ayaa ku taxaluqda habab kala duwan.
Gudaha, tijaabooyinkan gantaalladu waxay sii kordhinayaan sheekada Mr Kim ee ku-talagalka iyo ku-tiirsanaanta difaaca qaranka, halka sidoo kale ay tahay dhiirigelin dhanka niyadda ah.
Marka la eego waxqabadyada, awoodaha cusub, sida gantaaladan, waxay sii adkeeyaan qorshaynta kuwa ka soo horjeeda Kuuriyada Waqooyi, kuwaas oo hadda la dagaallamaya awoodo cusub.
Waxa tijaabooyinkaani muujinayaan ayaa ah in Mr Kim – in kasta oo uu si cad ula dagaallamayo dhibaatooyinka waddanka – haddana uu ku sii adkeystay go’aankiisii ahaa inuu sii wado horumarinta awoodiisa nukliyeerka.
Ilaa aan aragno isbeddel aasaasi ah oo mudnaanta leh Kuuriyada Woqooyi ama wacyi -gelinta diblomaasiyadeed ee uu Maraykanku ku guulaystay, Pyongyang waa in laga filaa inay sii waddo tayaynta iyo horumarinta awoodeeda.
Laakiin waxaa is weydiin mudan maxay Kuuriyada Waqooyi u dooratay xiligan in ay soo bandhigto nidaamkan hub?
Awoodda nukliyeer xambaaridda oo ay u baahnaayeen
Walaaca ugu weyn ee Kuuriyada Koonfureed, Japan, iyo beesha caalamka ayaa ah sharraxaadda warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ee gantaaladan cusub ee la tijaabiyay inay yihiin “hub istiraatiiji ah”.Tani badanaa waxay ka dhigan tahay in talisku rajaynayo inuu ku soo lifaaqo madaxyada nukliyeerka hubka.
Ma jiro nidaam gantaal oo hore oo maraakiib ah oo Kuuriyada Woqooyi ah oo lahaa doorka gudbinta hubka nukliyeerka.
Maxaynu kale ee ka naqaannaa gantaalahaas?
Gantaalada Cruise -ka ayaa sidoo kale si firfircoon uga duwan gantaalaha ballistic -ka oo ay Waqooyiga tijaabisay laba maalmood kadib.
Cunaqabateynta Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa dhab ahaantii ka mamnuucday Kuuriyada Waqooyi inay tijaabiso gantaallada ballistic – laakiin ma aha gantaallada lagu magacaabo cruise-ka.
Sababta ayaa ah waxa loo arkaa gantaalaha ballistic -ga inay ka sii khatar badan yihiin maxaa yeelay waxay qaadi karaan culeysyo waaweyn oo aad u xoog badan, waxay leeyihiin kala duwanaansho aad u dheer waxayna u duuli karaan si dhakhso ah.
Laakiin si ka duwan gantaalaha ballistic -ga, oo leh awood xaddidan oo ay ku dhaqaaqi karaan marxaladaha ugu dambeeya ee duulimaadkooda, maadaama culeyskoodu culus yahay, gantaallada se maraakiibtu way leexan karaan oo la maamuli karaa inta badan duulimaadkooda, taasoo u oggolaanaysa inay ka soo weeraraan xaglo aan la filayn.
Dhanka kale, duulimaadkooda joogga hooseeya wuxuu ka dhigan yahay in nidaamyada raadaarka dhulka ku salaysan ay inta badan kaliya ogaan doonaan gantaalladan marxaladaha ugu dambeeya ee duulimaadkooda, marka laga yaabo inay aad u hooseyso si guul leh in la isaga qabto.
Saudi-backed Newcastle takeover as much about status as...